Vidio ny vovoka L - (+) - Ergothioneine (EGT) Manufacturers (497-30-3) Mpanamboatra
L - (+) - vovony Ergothioneine (EGT) (497-30-3)
L - (+) - Ergothioneine (EGT) dia chiral amino-acid antioxidant biosynthesized amin'ny bakteria sy ny holatra sasany. Izy io dia sangan'asa bioactive manan-danja izay nampiasaina ho scavenger radical, mpanamory taratra ultraviolet, mpanova ny fihenan'ny famorsiana oksizenina sy bioenergetika sela, ary cytoprotector physiological, sns.
fanamboarana: Famokarana batch
Package: 1KG / kitapo, 25KG / amponga
02 Mifandraisa aminay
03 Horonan-tsary L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3)
04 L - (+) - Fampahalalana momba ny base Ergothioneine
anarana L - (+) - Ergothioneine (EGT)
Anarana simika (α-S) -α-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole-4-ethanaminium sira anatiny
Synonyms Ergothionine, L - (+) - Ergothioneine; Erythrothioneine
Molecular Weight 229.30
InChI Key SSISHJJTAXXQAX-ZETCQYMHSA-N
Bika Aman 'endrika fotsy mivondrona
Antsasak'aina manodidina ny 30 andro
Solubility Soluble anaty rano (50 mg / ml), acétone, etanol mafana, ary metanol.
Storage Condition -20 ° C (des.)
fampiharana Mpandrokona antioxidant sy maimaim-poana
Antoka fitsapana Available
05 L - (+) - Ergothioneine (EGT) Famaritana ankapobeny
L-Ergothioneine dia antioxidant maharitra izay mety ho hita eo ambanin'ny fepetra entin'ny fihenan-tsasatra loatra oksidatif amin'ny vatan'ny zavamaniry sy biby. L-ergothioneine dia mahavita mikaroka radical maimaimpoana ary miaro ireo sela amin'ny ROS voatazona UV miaraka amin'ny fahombiazana ambony noho ny antioxidants coenzyme Q (10) na idebenone, noho izany dia manamboatra antioxidant mahomby kokoa. Ny sangan'asa dia naseho ho antioxidant tsy manapoizina poizina, mampivoatra ny fitomboan'ny sela ampidirin'ny hydrogen peroxide (H2O2), ary mampiato ny fitrandrahana DNA amin'ny peroxynitrite (ONOO-) ao amin'ny tsipika sela hybridoma neuronal (N-18-RE- 105).
06 L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3) Tantara
Ny EGT dia vita amin'ny zavamananaina vitsivitsy, indrindra ny Actinobacteria, Cyanobacteria, ary holatra sasany. Ergothioneine dia hita tamin'ny 1909 ary nomena ny anaran'ny holatra ergot izay nanadiovana azy voalohany, ary ny rafitra dia nofaritana tamin'ny 1911.
07 L - (+) - Fanaovan-javatra Ergothioneine (EGT)
l - (+) Ny ergothioneine dia asidra amine thiol voajanahary ary misy fananana antioksida ary tombony mety ho famenon-tsakafo. Na eo aza ny famaritana azy efa an-jato taonany sy ny fizarana betsaka amin'ny sakafon'olombelona, ​​tsy dia fantatra loatra ny fomba fiasa sy ny fiarovana azy io.
08 L - (+) - Fangatahana vovoka Ergothioneine (EGT)
L - (+) - Efa nampiasaina i Ergothioneine:
ho toy ny singa an'ny fahamatorana ho an'ny mason-tsolika cumulus-oocyte (COCs) mba hizaha toetra ny fiarovana amin'ny fiforonan'ny lipid peroxide
ho toy ny vovon-tsivana manohitra ny diabeta karazana 2
L-Ergothioneine - karazana antioxidant voajanahary vaovao
EGT dia chiral amino-acid antioxidant biosynthesized amin'ny bakteria sy ny holatra sasany. Izy io dia sangan'asa bioactive manan-danja izay nampiasaina ho scavenger radical, mpanamory taratra ultraviolet, mpanitsy ny fanehoan-kevitra mihena ny oxidation sy bioenergetika sela ary cytoprotector physiological, sns.
L-Ergothioneine (EGT, ERGO, CAS: 497-30-3), fantatra ihany koa amin'ny (S) -α-Carboxy-2,3-dihydro-N, N, N-trimethyl-2-thioxo-1H-imidazole- Ny sira anatiny 4-ethanaminium, dia nesorina tamin'ny tanànan'ny Tanret C tamin'ny taona 1909, avy eo hita tao amin'ny ran'ny biby koa. Crystal EGT madio dia kristaly fotsy, afaka mihena ao anaty rano, (mihena 0.9mol / L amin'ny hafanan'ny efitrano). Ny otrikaretina dia tsy mety hitranga amin'ny lanjan'ny pH ara-batana na amin'ny vahaolana alkalinina matanjaka. EGT dia mety misy amin'ny endrika isomer roa - endrika thiol ary endrika thione, araka ny aseho eto ambany:
Miaraka amin'ny tombotsoan'ny asa marobe, EGT dia mijoro amin'ireo antioxidants maro hafa.Advantages (raha oharina amin'ny glutathione, cysteine ​​sns):
- —EGT mora kokoa ny miangona ao amin'ny sela ary mora kokoa noho ny antioxidant hafa ny fifantohana.
——EGT dia mandaitra kokoa amin'ny fampihenana ny fahafatesan'ny sela vokatry ny pyrogallol.
- —EGT matetika ny ROS dia miaro ny fandringanana, fa ny glutathione sy ny hafa kosa dia miady radika maimaimpoana, izany hoe vokatra hafa fanodinana antioxidant hafa.
ho fanaraha-maso tsara amin'ny proteinina mpitatitra entana 22 A4 (SLC22A4) fitaterana
L - (+) - Ergothioneine dia mety amin'ny fampiasana ny fandinihana ny fiatrany miaraka amin'ny disulphide 2,2'- sy 4,4'-dipyridyl (2-Py-SS-2-Py ary 4-Py-SS-4- Py), ho an'ny fampidirana sela manandramana raha manao fanandramana hetsika in vitro kinase ho an'ny ATM (Ataxia telangiectasia mutated) na ATR (ATM- sy RAD3-mifandray).
09 L - (+) - Ergothioneine (EGT) fikarohana bebe kokoa
Vokany: ny EGT no scavenger mahery vaika momba ny radika maimaimpoana raha ampitahaina amin'ny antioxidant mahazatra toy ny GSH, asidra urik ary trolox. Raha ny tena manokana dia ny fahaizan'ny antioxidant avo indrindra nasehon'ny EGT vs peroxyl radical dia nisondrotra 25% avo noho ny sandany azo miaraka amin'ny antioxidant trolox. Ny fahafaha-manavanana ny EGT mankany amin'ny radical hydroxyl dia avo 60%, raha oharina amin'ny asidra urikia, izay maneho ny antioxidant fambara sy ny radika hydroxyl. Farany, EGT dia naneho ny hetsika antioxidant avo indrindra ho an'ny peroxynitrite, miaraka amin'ny fahafaha-manao trondro 10% avo noho ny asidra urik.
FIVORIANA HAFA AZY
Ny EGT koa dia misy fiantraikany amin'ny famerana ny angovo intracellular,
manatsara ny hery fiarovana,
fanatsarana ny taham-pahafatesan'ny sperma.
miaro ny aty amin'ny ratra
tsy fahampiana ary ny katarakta.
5-10mg isaky ny mpizara ho an'ny olon-dehibe sy mpiasa an-tsitrapo 2-3 dia ilaina amin'ny sakafo isan'andro.
Loharano: Li Yiqun, Zhou Nianbo. Fampiasa Biolojia sy fampiharana amin'ireo EGT [J]. Engineering Engineering ， 2010，9 （3） ： 26-28.
■ Ny lisitra dia voatanisa toy izao manaraka izao:
Ankizy (3-11 taona)
Mgl 0 mg / andro
Tanora (11-21 taona）
≤30 mg / andro
Olon-dehibe (21-80 taona)
Fatra ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe （3 -80 taona）
Tsy ampiasaina amin'ny vehivavy bevohoka na lactating.
Loharanom-baovao: Tetrahedron rehefa mangataka ny US NDI
■ Ny angon-kevitra manondro: 10.5mg / g ho an'ny ADI OXIS (Hetsika azo ekena isan'andro).
10 L - (+) - Fikarohana Ergothioneine
11 L - (+) - Ergothioneine (EGT) powde Reference
Tanret Sur une base nouvelle retiree du seigle ergote, l'ergothioneine Compt. Rend., 149 (1909), pp. 222-224
Akanmu D, Cecchini R, Aruoma OI, Halliwell B (Jolay 1991). "Ny hetsika antioxidant an'ny ergothioneine". Arch Biochem Biophys. 288 (1): 10–
"Ergothioneine". PubChem, Ivontoeram-pirenena momba ny fampahalalana momba ny biotechnology, Tranombokim-pirenena amerikana momba ny fitsaboana. 2 Novambra 2019. Nalaina tamin'ny 7 Novambra 2019.
L-Ergothioneine (EGT): Antioxidant azo avy amin'ny sakafo miaraka amin'ny hery ara-pahasalamana
12 FIVAVAHANA SY FANADIKANA:
02. Mifandraisa aminay
03. Horonan-tsary L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3)
04. L - (+) - Fampahalalana momba ny base Ergothioneine
05. L - (+) - Ergothioneine (EGT) Famaritana ankapobeny
06. L - (+) - Ergothioneine (EGT) (497-30-3) Tantara
07. L - (+) - Fanaovan-javatra Ergothioneine (EGT)
08. L - (+) - Fangatahana vovoka Ergothioneine (EGT)
09. L - (+) - Ergothioneine (EGT) fikarohana bebe kokoa
10. L - (+) - Fikarohana Ergothioneine
11. L - (+) - Ergothioneine (EGT) powde Reference
12. FIVAVAHANA SY FANADIKANA:
668, làlana Xiangyin, Distrika Yangpu, 200433, Shanghai, China
Hitady anay amin'ny sarintany
Pterostilbene Vs Resveratrol: Iza amin'ireo tsara kokoa ho an'ny fahasalamanao? 2020-08-26
Tombontsoa 10 momba ny fahasalamana amin'ny glutathione ho an'ny vatanao 2020-06-06
Sakafo azo avy amin'ny lalivay mena: Tombontsoa, ​​fatra sy sakana 2020-05-20
Tombontsoa sy fampiharana amin'ny tongolo mainty ny tongolo mainty 2020-05-14
Ny fanosotra vovoka
Alefaso izahay mailaka
Niantso antsika amin'ny alalan'ny Skype
Misoratra anarana amin'ny Channel YouTube